Asingasviki hafu yezviri mukati paApple Podcast ine gumi kana kupfuura episodhi | Ndinobva mac
Asingasviki hafu yezviri mukati paApple Podcast ine zvikamu gumi kana kudarika
Apple podcast chikuva chaive chekutanga, kana chisiri chekutanga kurova pamusika. Kunyange zvakadaro, Apple haina kubhadhara zvakakosha uye nhasi zvakapfuurwa zvakanyanya nemamwe mapuratifomu mazhinji achangopfuura. Neraki, Apple yanga isina kukanganwa zvachose uye kwemwedzi mishoma vayeuka zvakare kana vangosimudzira zviripo paApple TV +.
Zvinoenderana nevakomana pa amplifi, iyo podcast chikuva parizvino chine anopfuura mamirioni maviri ezvirongwaZvisinei, vazhinji vavo, 26%, vakangoburitsa chikamu chimwe chete, saka huwandu hwemamiriyoni maviri hunofanira kutorwa nezviyo zvemunyu.
Kana tikaramba tichipaza zviyero, tinoona kuti 44% yemapodcast anowanikwa paApple podcast, akaburitsa zvikamu zvitatu kana zvishoma, saka havakwanisi kunzi podcast, kana tikadaidza nheedzano yezvikamu zvina kana kupfuura podcast. Saka. Kana tikabvisa ese ma podcast, iyo chaiyo podcast inowanikwa papuratifomu iyi zviuru mazana masere zvepodcast.
Huwandu hweepodcast hunopa zvikamu gumi kana kupfuura zvikamu makumi matatu nezvitatu kubva muzana, kuisa huwandu pa 720.000 zvirongwa. Chirevo ichi chinoratidza kuti episode imwe chete podcast inosanganisa chikuva, sezvo ivo vari mushandisi kuyedza izvo zvisina kuenda kumberi, saka havafanirwe kuramba vachiwanikwa.
Causally, sekureva kwaJames Cridland wePodnews.net, mazhinji emapodcast ane episode imwe chete vanobva kuAnchor, Spotify, Spreaker uye iHeart, yemahara yekutambira vanopa iyo inokwezva vatsva podcasters vachiri kuyedza nesvikiro.
Amplifi inoratidza kuti nzira yechiito chimwe chinoburitsa chiuru chemamirioni zvakaenzana nekusanganisira zviratidzo zvepa terevhizheni izvo zvakagadzira mutyairi asi havana kumbove dzakateedzana pane ese-enguva terevhizheni showa rondedzero.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » Asingasviki hafu yezviri mukati paApple Podcast ine zvikamu gumi kana kudarika
Mufirimu unouya waApple TV + waMartin Scorsese unowedzera kuwedzera kwayo